रेडियो नेपाल परिसरबाट ९ जना पत्रकार पक्राउ
काठमाडौ, ३० भदौ । विभिन्न माग राख्दै रेडियो नेपाल परिसरमा धर्नामा वसेका ९ जना पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा रेडियो नेपालको प्रदेश प्रसारण केन्द्र दिपायलबाट निस्कासित तीन जना पत्रकारको पुनर्बहाली तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको माग राख्दै रेडियो नेपाल परिसरमा धर्नामा वसेका पत्रकारलाइृ..
काठमाडौँ, ३० भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्..
काठमाडौँ, ३० भदौ । मुलुककै पुरानो कारागारका रूपमा रहेको केन्द्रीय कारागार जगन्न..
फिक्कल, ३० भदौ । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहका जिल्ला सेक्रेटरी दिपेन राई जेल..
काठमाडौँ, ३० भदौ । काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणको काम हालसम्म ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको..
गाउँपालिका अध्यक्ष साउदमाथि गोली प्रहार
अछाम, ३० भदौं । अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झङ्करबहादुर साउदमाथि आइतबार साँझ गोली प्रहार गरिएको छ । दुई अज्ञात व्यक्तिले गाउँपालिकाको वडा नं ३ मुजाबगरस्थित कार्यालयको आवासमा बस्दै आएका साउदलाई गोली हानेका हुन् । उनी गाउँपालिका कार्यालय रहेको भवनको माथिल्लो तलामा बस्दै आएका थिए । अध्यक्ष साउदले प्रतिकार गर्न खोज्दा गोली ..
दोलखा, ३० भदौ । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका प्रदेश नम्बर ३ कै पहिलो बालमैत्री नगरको रुपमा घोषणा भएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनका सम्पूर्ण सूचक पूरा गरेर आइतबार एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश नम्बर ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बालमैत्री नगर घोषणा गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा दुलालले प्रदेश नम्बर ३ लाई २०८० सम्ममा बालमैत्री ..
सोलुखुम्बु, ३० भदौ । तीन दिनदेखि मौसम प्रतिकूल बन्दा सोलुखुम्बुको लुक्लामा सयाँै विदेशी पर्यटक अलपत्र परेका छन् । खुम्बु क्षेत्र भ्रमणमा आएर काठमाडौँ फर्कने करीब ३०० भन्दा बढी पर्यटक लुक्लामा नै रोकिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाका प्रमुख इमानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शुक्रबारदेखि मौसम प्रतिकूल हुँदा पर..
काठमाडौं, ३० भदौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४० बढीको अकुत सम्पत्तिमाथिको छानबिन गुपचुपमा राखेको छ । अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानबिनलाई अघि बढाए पनि उच्च ओहोदा र राजनीतिक पहुँच भएकाहरू भने सहजै उम्कन सक्ने देखिएको छ । अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीलाई मात्रै केन्द्रित गरेपछि उच्चपदस्थहरू उम्क..
नेपाली स्याटेलाइटले थाल्यो संवाद, ग्राउन्ड स्टेसनसँग नेपाली स्याटेलाइटको दोहोरो सम्पर्क
काठमाडौं, ३० भदौं । नेपालको पहिलो भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) ‘नेपाली स्याट–१’ ले नियमित रूपमा ग्राउन्ड स्टेसनसँग सम्पर्क गर्न थालेको छ । स्याट–१ ले पठाएको सूचना, तथ्यांक र अन्य विवरण स्टेसनले नियमित रेकर्ड गर्न थालेको हो । स्याटेलाइटमा जडान भएको ब्याट्रीको अवस्था, पृथ्वीलाई फन्को लगाउन लाग्ने समयावधि, पृथ्वीसँगको दूरी, सो उपकरण रहने..
चीनको बिआरआईबाट नेपालले लाभ लिन्छ:अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ, २९ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिमेकी चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) सामूहिक विकास र ‘कनेक्टिभिटीसँग’ सम्बन्धित भएकाले यसका परियोजनामा सामेल हुन नेपालले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बिआरआई संवाद’ मा अ..
भक्तपुर, २९ भदौ । गत वर्ष भाद्र शुक्लपक्ष पूर्णिमाको दिन राति ८ बजे मध्यपुरथिमि नगरपालिका दिगु भैरव मन्दिरको मण्डपमा मध्यपुरथिमि–५ चोडेका ४० वर्षीय बालकराम श्रेष्ठले जिब्रो छेड्नुभयो । विसं २०६३ देखि रोकिएर यो जात्राले गत वर्ष पुनर्जीवन पाएपछि अब हरेक वर्ष निरन्तर जात्रा सञ्चालन होला भन्ने आशा यस वर्ष फेरि म¥यो । जिब्रो छेड्ने ..
काभ्रेपलाञ्चोक, २९ भदौ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले डेंगु रोग नियन्त्रणपछि मात्रै समायोजनमा परेका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई ‘रमाना’ दिने भएको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रबाट डेंगु रोगको प्रकोप फैलँदै पहाडी क्षेत्रमा समेत सङ्क्रमण बढ्न थालेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आदेशअनुसर जिल्ला स्वास्थ्य कार्य..
झापा, २९ भदौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र आफ्नो कार्यकारी एकल नेतृत्व स्वीकार गर्न माग गरेका छन् । अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गृह जिल्लामा उनले नेतृत्वका लागि विश्वास गर्न कार्यकर्तासमक्ष आग्रह समेत गरे । संविधानसभा सदस्य गौरीशंकर खड्काको स्मृतिमा गठित प्रतिष्ठान..
काठमाडौं, २८ भदौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त गरी संघीय संसद्को कारबाही सञ्चालनका लागि तीनवटा नियमावली बनाइएका छन् । नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र दिइसक्नुपर्छ । महिनामा दुईपटक प्रधानमन्त्रीले प..
काठमाडौं, २९ भदौं । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ढलको पाइप राख्न गत असारमा चाबहिल–चुच्चेपाटी सडक खने । खनेको सडक मर्मत नगरी छाडेपछि एक महिनासम्म सर्वसाधारणले सास्ती भोगे । एक महिनापछि सडक खनेर पुरेलगत्तै फेरि ढल मर्मत गर्न भन्दै सडक खनियो । खनेको सडक नपुर्दा पानीमा हिलो र घाममा धुलोले सर्व..
कीटमा अस्पतालको ठगी धन्दा, मन्त्रालय रमिते !
काठमाडौं, २९ भदौं । डेंगु परीक्षणका लागि कीट प्रयोग नगर्न सरकारले रोक लगाए पनि निजी तथा सरकारी अस्पतालले यसैको नाममा रकम असुल्दै आएका छन् । अस्पतालले सरकारको निर्देशनविपरीत ‘डेंगु परीक्षण शुल्क’ भन्दै ४ सय रुपैयाँदेखि १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म असुल्दै आएको पाइएको छ । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकाय भने रमिते ब..
गरिबीले लिंदै ज्यान, जसले ५ लाख ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोजे
वीरेन्द्रनगर, २८ भदौं । वीरेन्द्रनगरको कालुञ्चोक क्षेत्रमा घर जग्गा । साथमा श्रीमती र दुई छोरी । सानो र सुखी परिवार तथा र डेढ वर्षअघि २५ वर्षीया घनबहादुर खासुमगरले आत्महत्याको बाटो रोजे । कारण थियो–गरिबी । छिमेकीका अनुसार घनबहादुरले घर निर्माण गर्दा सहकारी र विभिन्न व्यक्तिबाट ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ‘आम्दानीको अरु माध्यम थ..
६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन अन्योलमा
काठमाडौं, २८ भदौं । कर्मचारी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत झण्डै ६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै हाल प्रदेशमा १३ हजार १२८ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कार्यरत छन् । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ..
नेपाली सेनामा अनियमितता : प्रतिष्पर्धा बिनै सामान खरिद
काठमाडौं, २८ भदौं । माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाको बन्दोबस्तीसम्बन्धी सामग्री बिना प्रतिष्पर्धा खरिद भइरहेको छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया शुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिंदा सामान आपूर्तिमा खुला प्रतिष्पर्धा हुन नसकेको हो । विसं २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेप..
काठमाडौं, २८ भदौं । सडक दुर्घटना बढ्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिउँसो टिपर चलाउन रोक लगाइएको छ । तर, पनि टिपरका कारण हुने दुर्घटनामा कमी आएको छैन । ०७५ असारमा गृह मन्त्रालयले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रशासन कार्यालय र ट्राफिकलाई दिउँसो टिपर चलाउन नदिन निर्देशन दिएको थियो । गृहको निर्देशनअनुसार अहिले राति ७ बजेदेखि बिह..
काम नथाल्दै, कुन ठेक्कामा कति ?
काठमाडौं, २८ भदौं । समयमा काम हुन नसकेका एक हजार ८४८ वटा ठेक्काबाट झण्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ‘घुस’ प्रवाह भएको भेटिएको छ । यस्ता ठेक्काबाट २.५ प्रतिशत अग्रिम घुस अनि मोबिलाइजेसन पेस्कीका नाममा थप त्यति नै घुस प्रवाह भएको हो । यीमध्ये ५० भन्दा बढी ठेक्का आयोजनामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कति घुस ? […]
फिरौती काण्डमा पक्राउ परेका गृहमन्त्रीका भाइ नरेशले किन भेटे कैदी ?
काठमाडौं, २८ भदौं । फिरौती संकलनमा सक्रिय भएको अभियोगमा पक्राउ परेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश थापाले आफूले सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा गएर समीरमान बस्नेतलाई नभेटेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँगको बयानमा थापाले बस्नेतलाई नचिनेको दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय कारागारको सुरक्षार्थ खटिए..
डेंगु नियन्त्रणमा कहाँ चुक्यो सरकार ?
काठमाडौं, २८ भदौं । डेंगुको संक्रमणबाट एक विद्यार्थीसहित ६ जनाको ज्यान गएको छ । झण्डै चार महिनादेखि विस्तारित डेंगु संक्रमण अहिले ६२ जिल्लामा फैलिएको छ । मुलुक डेंगुमय भइसकेको छ । अझै तीन महिना डेंगुको संक्रमण देखिन सक्ने चिकित्सकको अनुमान छ । तीन सय मिटरसम्म टाढा उड्ने एडिस जातको संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइले घरैपिच्छे पीडा दिएक..
वसन्तपुरमा प्रहरी धरपकड: पूर्व डिआइजीसहित ५ दर्जन पक्राउ
काठमाडौं, २७ भदौ । नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी सहित ५५ बढीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कालो झन्डा देखाउने तयारी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले राजधानीको वसन्तपुरबाट पक्राउ गरेको हो । राष्ट्रपतिविरुद्ध विरोधको तयारी गरिरहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले पूर्व डिआइजी विजय भट्ट सहित अन्यलाई पक्राउ गरेको प..